I-Huawei FreeBuds 4, uphuculo lwemveliso egqibeleleyo Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 18/08/2021 12:00 | ngokubanzi, Reviews
Kwi-Gadget ye-Actualidad sikuphathela imveliso yeaudiyo kwakhona, uyazi ukuba sifuna ukukugcina unolwazi ngeendaba kuwo onke amabakala, kwaye uHuawei ngomnye wabavelisi obonelela ngezinye iindlela ezahlukeneyo kumaxabiso ahlukeneyo. Ukulandela impumelelo ye-FreeBuds 3, iHuawei iyayiphucula imodeli kwaye iyenze phantse igqibelele.
Fumanisa kuthi i-Huawei FreeBuds 4 entsha, ii-headphones ze-TWS ezintsha ezinokurhoxiswa kwengxolo okusebenzayo. Sihlalutya zonke izinto zayo, amandla kunye nobuthathaka kolu hlaziyo olunzulu, ngaba uya kuliphosa? Siqinisekile ngokuqinisekileyo ukuba hayi, joyina nathi kolu hlalutyo lutsha.
Ukuba ujonga uninzi lophononongo uya kubona ukuba uninzi lwabahlalutyi bayavuma ukuba ezi Huawei IifreeBuds 4 Zezona ntloko zibiza amaxabiso aphambili kwintengiso xa sithetha ngakumbi ngee-headphone ezivulekileyo, kodwa sithanda ukukunika olwethu uluvo, kwaye ngenxa yoku kufuneka sibavavanye nzulu… Masihambe!
Ubuthandile? Bathenge ngesaphulelo ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-20 kwiAmazon.
1 I-Ode yokuvula uyilo lweentloko
3 Isandi kunye nomgangatho wokurekhoda "hache-dé".
I-Ode yokuvula uyilo lweentloko
Ii-headphone ezisezindlebeni zilunge kakhulu, zilunge ngakumbi ukuba awuziyeki, ngakumbi ukuba unayo enye yeendlebe ezimbalwa ezithi iinjineli zoyilo zenkampani zibonakale zithathela ingqalelo xa zisenza ii-headphones zazo ze-TWS, zilunge ngakumbi ekwenzeni umgangatho ukurhoxiswa kwengxolo esebenzayo. U-Huawei uye wacinga ngabo bonke abasebenzisi abanenzondo kwii-headphone ezisezindlebeni nokuba kungenxa yokuba beyekile okanye basenzakalisile, kwaye uthathe isigqibo sokufikelela kuthi ngokurhoxiswa kwengxolo okusebenzayo I-Huawei FreeBuds 4, iphantse yafana ne-Huawei FreeBuds 3 kuyilo, kwaye ndicinga ngokunyanisekileyo njengokhetho lwam kuphela. Ngaphandle koku, kwi-Podcast esiyenzayo ngokusebenzisana ne-Actualidad iPhone uya kuba nakho ukubona ukuba bendisebenzisa i-Huawei FreeBuds 4i iinyanga, ukuphikisana nekamva (ngekhe ndinike iHuawei FreeBuds 3 yam).
Imibala ekhoyo: Imhlophe kunye nesilivere
Imikhono abicah: Luhlaza, orenji, bhlowu kunye nomnyama
Ngoyilo lweempawu "ezivulekileyo", ezi FreeBuds 3 zihlala endlebeni, zingawi, ngaphandle kokuzahlula, ngaphandle kokukuphazamisa. Sinobukhulu bento nganye yendlebe ye-41,4 x 16,8 x 18,5 mm ye-4 gram kuphela, Ngelixa ityala lokutshaja, eliguqukele kubungakanani obucekeceke ngakumbi kunenguqulo yangaphambili, lihlala kuma-58 x 21,2 iimilimitha ngeegram ezingama-38 (xa zingenanto).
Isiphumo kukuthuthuzeleka okungathethekiyo kwii-headphone, kunye noyilo ebhokisini olwenza ukuba lube ngumhlobo wezo bhulukhwe ziphinde zanamathela esizinxibayo namhlanje, ayikhathazi, isebenza ngokulula ngesandla esinye kwaye umgangatho wokwakha, njengesiqhelo eHuawei, ulunge ngakumbi.
Ndikuxelele kakhulu, kwaye andithethanga nto kuwe. Ukuqhubela phambili kweklasi siza kunika uluhlu lweedatha ezinomdla, masithethe ngeempawu zobuchwephesha. SineBluetooth 5.2, uHuawei uzibophelele kwinguqulelo yamva nje efumanekayo kwimarike yokunciphisa ubuchule kunye nokuphucula unxibelelwano. Njengazo zonke izixhobo zeFreeBuds esinazo zokubhanqa ngokuvula pop-up, oko kukuthi, ukungqamanisa ngokuzenzekelayo nezixhobo zeHuawei (EMUI 10 okanye ngaphezulu), sicinga ukuba nge-chip yeNFC ethintelweyo.
Sinomqhubi we-14,3 millimeter Kwiyunithi nganye ethembisa ngesandi esichazayo, iselfowuni nganye inemoto yayo ukuvelisa ukungcangcazela okukhulu kwidayaphragm, oku kuguqulela kwi-bass eya kuthi ikhanyise abathandi bomculo abarhwebayo, kamva siza kuthetha ngakumbi ngolu hlobo lwesandi. Uluhlu lwamaxesha, enkosi kumlawuli I-LCP ifike kwi-40 kHz, ke amaplanga kunye namanqaku aphezulu ayomelezwa.
Isandi kunye nomgangatho wokurekhoda "hache-dé".
Umgangatho wayo wesandi awunakuphikiswa, sinawo I-bass eqiniswe ngakumbi (bass) Kwaye abo bathanda umculo wentengiso encinci baya kuba nakho ukusebenzisa i-Huawei's AI Life application, efumanekayo kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS. Sinamanqaku aphezulu kunye aphakathi kwezona zilungileyo esingcamle ukuza kuthi ga ngoku, ngakumbi kwii-headphone ezivulekileyo, apho zinokuphazanyiswa sisandi esibi okanye ukuphazamiseka. I-Huawei isonge i-curl ngomgangatho weaudio wee-headphone ukuba sijonga ukuba "zivulekile", into eya kuthi ingavunywa ngumntu wonke.
Njengoko iHuawei ingafuni ukushiya ngasemva abasebenzisi abala i-headphone ezisezindlebeni, igqibe kwelokuba iqhubeke nokusebenza kwi-niche uninzi lweemveliso esele zilushiyile ngokuthe ngqo, ngaloo ndlela zisinika I-ANC 2.0 ethembisa ukuya kuthi ga kwi-25db yokupheliswa kwengxolo ngaphandle kwesidingo sokufaka irabha ecaphukisayo ezindlebeni zethu. Njengoko indlebe nganye yahlukile, iisenzi kunye neemakrofoni zeFreeBuds 4 ziya kuhlalutya kwaye zinike uthotho lohlengahlengiso oluvumela ukucinywa kwengxolo ngokugqibeleleyo.
Kunzima ukuba akunakwenzeka ukwazi ukuba ngenene zonke ezi zithembiso ziyenziwa ngaxeshanye, Ekuphela kwento esinokugweba ngayo kukurhoxiswa kwengxolo, kwaye ndiyangqina ngaphandle koloyiko lokuba ndiphosakele eyona ifanelekileyo ixhotyiswe 'evulekileyo' iseti yentloko, Umahluko omkhulu. Andikuboni kuphazamiseka kumgangatho weaudio kwaye ukurhoxiswa kungaphezulu kokwaneleyo kusetyenziso lwemihla ngemihla.
Banazo Ukurekhodwa kwe-48 kHz HD enkosi kwiindlela ezimbini zokumisela:
Indawo esingqongileyo: Thatha izandi ezikungqongileyo kwirediyo
Amazwi: Ngokwamkelwa kwesantya selizwi, iya kuphucula umahluko kwaye ishiye imeko ngasemva
Kunzima ukuyichaza Ndikucebisa ukuba ujonge ividiyo ye-Androidsis apho senza uvavanyo oluvakalayo lweemakrofoni. Ungazithenga ngexabiso elifanelekileyo kwaye ngaphandle kweendleko zokuhambisa, ungalibali.
Sinenkululeko yokuzimela iyure ezi-4 kwintloko nganye kunye ne-ANC engasebenziyo kwaye Iiyure ezingama-2,5 kunye ne-ANC ivuliwe. Ityala elinetyala ngokupheleleyo Iimvavanyo zethu zifike phantse kufutshane nokuzimela okubonelelwa nguHuawei, othembisa iiyure ezingama-22 zokudlala ngemizuzu eli-14 kuphela yentlawulo. Ngokucacileyo, sinokutshaja ngaphandle kwamacingo (ukuba sihlawula enye i-euro ezingama-2,5 ...).
Ngale ndlela, iHuawei FreeBuds 4 ithathwa njengenye yezona zilungileyo (ngokokubona kwam kokona kulungileyo) ukhetho lwee-headphones ze-TWS ezisemgangathweni, ukuvelisa kunye nokuhambelana. Ziyathengiswa eAmazon, ungazithenga kwii-euro ezingama-119 (Ixabiso le-149 lama-euro eliqhelekileyo), kunye newebhusayithi esemthethweni ye- Huawei.
Ithunyelwe nge: 18 Agasti 2021
Utshintsho lokugqibela: 8 Septemba ye-2021
Izixhobo, uyilo, intuthuzelo kunye nokwenziwa
Ibhokisi ikrweleke ngokulula
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Huawei FreeBuds 4, ukulungiswa kwemveliso ephantse yagqibelela [Ukuphonononga]